From the Ground: Uganda & Rwanda - Amjambo Africa
From the Ground: Uganda & Rwanda
Madaxweynayaasha Uganda iyo Rwanda waxaa ka dhexeeyaa xariir ah naceeb iyo jaceel isku jira ah ilaa iyo marka uugu horeysey ay kulmaan 1980. Waxay wada dhameeyeen xasuuqii Rwanda iyo kii DR Congo 1990. Mar dhhaweed waxaa dib usoo kacey xaalad kacsanaan ah oo udhaxeyso labada Maamul waxay isku edeeyaan midba mid kale in uu xaalid halis ah abuurayo.
Dadka noo warama ayaa kawalwalsan in dhibaatada baahsan kadhaxeysa Rwanda iyo Uganda. Waxay kadigeen in dhibaatada ka dhalan doonaan dhibaatooyin ah dhinaca dhaqaalaha, bulshada iyo biniaadamnimo. Labada wadan waxaay ka macaashaan ayna yihiin kuwa ku hagaya nabad gelyo. Waziirka arimaha dibida ee Rwanda Dr, Sezibere araa ku eedeeyey Uganda in aay beegsaneyso muwaadaniin Rwanda udhashey ayna ka masaafuriyaan wadankooda. Dadka reer Rwanda waxay ka baqayaan in ay aadaan Uganda ama ayba dhaxmaraan si ay ugaaraan Kenya ama wadamada kale ee wadamada Geeska Afrika.
Hase yeeshee waxaa dadka reer Rwanda waxay ku qasbanyihiin in ay diyaarad raacaan ama Tanzania dhaxmaraan, taasoo keeneysa in uu safarka dheeraado. Rwanda waxay xirtey xuduuda udhaxeyso ayaka iyo Uganda wax wada tashi ayadoo lagalin Uganda bishii labaad lasoo dhaafey. Ayakoo sheegeen in uu dhismo ka socdey waxaa meesha ku xanibmey gawaaridii Uganda ka imaateen. Waxaa la rajeynayaa in uu dib ufurmo bisha shanaad (5) dadka jooga Maine Kuwaas oo qaraabadoodu kunoool yihihhm Uganda iyo Ruwanda waxaay inoo sheegeen in ay rajeynayaan in xaalada udhaxeysa Uganda iyo Rwanda ladejiyo hase yeeshee wax wadahadal ah oo socdo majiraan.
PreviousBisha afraad iyo dhaqmada kala duwan ee tima tidcista
NextFrom the Ground: DR Congo
Xirfad-yaqaanka marin u helka farqiga daryeelka caafimaadka
Dhamaan ku saabsan kaararka lacag bixinta
Sida Dayrka Caafimaadka u sameeyay amaahda
Waa Macau amahdu?